Imveliso ebalulekileyo yabasetyhini
Abachwepheli bezilwanyana bacebisa imikhiqizo enempilo yabasetyhini. Ezi mveliso ziqulethe izinto ezibalulekileyo kwimpilo yowesifazane wesigqeba. Kukho iimveliso ezinokuthintela izifo ezahlukeneyo zesini, ukunciphisa utshintsho olunexesha elidala nokugcina ubuhle.
Imveliso ejongene nabasetyhini
I-Broccoli iyimveliso ebalulekileyo yowesifazane. Kwi-broccoli, kukho iivithamini ezininzi ze-B, ii-philats ezibandakanyeke ekubunjweni, kunye nokukhuselwa kwe-DNA, ekuveliseni iiseli ezintsha, ukuhlanganiswa kwamaprotheni. Kodwa ngokugqithiseleyo, i-broccoli idume ngeempawu zayo ezikhusela umzimba wesifazane kwimfundo, kunye nokusabalaliswa komhlaza. Izinto ezincedo kwiklabishi, xa zitshiswa, zigalelo ekuphuhlisweni kwee-enzyme ezikhethekileyo ezikhupha umzimba kwi-toxic and carcinogens.
Ngokusekelwe kwiziphumo zezifundo ezahlukeneyo, kwafunyanwa ukuba icandelo le-Idenol-3, okanye i-carbinol, linika inzuzo ethile kumzimba. Eli candelo liyakwazi ukukhusela umfazi wesifo somhlaza webele, umhlaza wesibeleko. Ukusetyenziswa kwale klabishi kwenza kube lula ukuyeka inkqubo esele iqalile yesifo. I-flavonoid kaempferol, equle kwi-broccoli, inciphisa amathuba okuba ne-tumor kuma-ovari. Ngomlinganiselo ongenamkhawulo kule mveliso yintlobo, ekhuthaza ukubunjwa kwe-serotonin - "ihomoni yolonwabo." Kufuneka kwakhona ukuba umfazi, ngenxa yokuba egxininisekile kwaye ecinezelekile kunomntu.
Uncedo kakhulu kubasetyhini be-sauerkraut. Ngokuqhelekileyo inkqubo yokugaya kunye nokususa izinto eziyingozi emzimbeni.
Kwiitamatati, inani elikhulu le-antioxidants. Ziyakuthintela ukuphuhliswa kwesibalo sezifo, ngokukodwa, isifo esinjalo njengomhlaza wesifuba. Le mifuno igalelo ekucaleni, ukususwa kwe-cholesterol embi egazini, kuncitshiswe uxinzelelo, aluvumeli ukuguqulwa kwe-nertic optic.
Ngokwexesha eliqhelekileyo lomjikelezo wesini, ubutsha besikhumba kunye nokubunjwa kohlobo ludibana ne-estrogens (i-hormone zesinikazi zesini). Ukulondoloza ulutsha kunye nolwasemzimbeni (phytoestrogens) zisetyenziselwa (izityalo ezifana neentlobo ze-hormone zesini). Zanele ngokwanele kumantongomane, imbewu, okusanhlamvu, iimbotyi. Kwakhona, ii-phytoestrogens zifumaneka kwiimveliso zobisi, kwaye zininzi ngokwaneleyo. Ezi zinto zininzi ukhilimu, ushizi onzima, ubisi. Ezi mveliso zinceda kubasetyhini, kodwa musa ukuzigqitha. Ngenani elikhulu lezi zinto emzimbeni, ukuphuhliswa kwama-hormone azo ngokwesini ngeke kuvuselelwe, kodwa kuya kuqala ukuvalwa. Oku kungakhokelela ekuhambeni kwesisu kunye nokuguga kwasekuqaleni komfazi. Imveliso kufuneka isetyenziswe ngokumodareyitha ukwenzela ukuba ungayicaphuli ibhalansi ye-hormonal.
Iklabishi yeLeaf iyimvelaphi yobomi. Le klabishi inceda kakhulu kubafazi abakhulelweyo. Emva koko, ukungabi nento ye-folic acid kungakhokelela kwiiphene kwi-tube ye-neuromuscular kwiintsana.
Ezinye iimveliso ezincedo kumzimba wesetyhini
Kukho na ukutya, abafazi bangafaka ubhontshisi. Le mveliso inondlo, iqulethe i-fat fat, icebile kwifiber. Ukongeza, kunye nokusetyenziswa kweembotyi, umzimba uphawuleza kwaye unqande ngokusisigxina indlala, le mveliso inceda ukunqanda umhlaza wesisu, oqhelekileyo kubasetyhini kunamadoda.
I-Cranberry iluncedo kumzimba wesifazane. Unemiphumo ekhethekileyo yokulwa nokuvuvukala kunye nefuthe leentsholongwane. Ngokukodwa ukuyisebenzisa kuyaphakanyiswa ngexesha lonyango lwezonyango ze-genitourinary system kunye nokukhusela ukuvela kwezifo. Kwakhona, umphumo wokukhusela ama-crranberries ukusuka kwiisisu kunye nezifo zokuphefumula ziqinisekiswa ngezifundo zanje. Kukulungele ukuba umfazi athathe ingilazi yerayisi ye-cranberry imihla ngemihla okanye adle amajikijolo ambalwa.
Ngomfazi ofuna ukulala ngokwesondo, umbane onomdla kakhulu ngumvana. Ingumthombo we-manganese kunye ne-zinc, kwaye igalelo ekuveliseni i-testosterone, kwaye isebenza. I-Testosterone isekela ubulili besini. Kodwa i-hormone echaphazelekayo ikhiqizwa ngokwenza impilo, ukudansa, njl.
Ukuba ibhinqa isebenzisa ukutya okuluncedo, ke umntu akanakukukhusela kuphela ukuphuhliswa kwezifo ezininzi, kodwa nokugcina umfanekiso omhle nobutsha ixesha elide. Wonke amabhinqa anenzela oku.
Ii-chips, i-soda kunye nezinye izinto eziyingozi
Indlela i-Linseed Oil ithinta ngayo ukunciphisa
6 iintsomi malunga nesidlo emva kwe-18.00
Isobho sokukhanya kwi-yellowtail
U-Ivan Okhlobystin wabonisa umzekelo wemfundo eqinile, ividiyo
U-Alexander Panayotov waziqhayisa izipho ezixabisekileyo ezivela kubalandeli
Ziziphi izihlangu ezifashisayo kule nkwenkwe kubaselula
U-Alla Berger watshilo ngobomi emva kokubonisa "uBach" ixesha eli-4 kunye no-Alexei Vorobyov
Sipheka i-goose kwi-oven. Iingcebiso, amaqhinga kunye nokupheka
Yintoni engcono kwimpilo: ibhotela okanye iargargarini?
Indlela yokwenza ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza ulahlekelwe isisindo ngoncedo lwezidlo?
Uhlahlo lwabiwo-mali lwentsapho kunye namatyala
Inendima ye-fontanel ebomini bomntwana
I-Network inokufumana ividiyo ye-plastiki e-Evelina Bledans
Unokuyithatha njani ukunqongophala kwesini
Ikhukhi kunye neyinanimpe